Torohevitra hitsidihana ny riandranon'i Iguazu amin'ity 2016 | Vaovao momba ny dia
Torohevitra hitsidihana ny riandranon'i Iguazu amin'ity 2016 ity
Mariela Carril | | Arzantina, soso-kevitra
Milatsaka i Iguazu Andian-riandrano mirotsaka sy riandrano marevaka izy ireo izay eo amin'ny sisin-tany manelanelana an'i Arzantina sy Brezila. Na dia azo tsidihina avy amin'ny firenena roa aza izy ireo, ny fitsidihana avy any amin'ny faritr'i Arzantina no tsara indrindra satria miditra ao anelanelan'ny riandrano ianao ary tsy voavidim-bola izany.
Teraka ao Brezila, ao amin'ny Serra do Mar ny reniranon'i Iguazú, ary rehefa avy nandeha 1300 kilometatra dia niditra tao amin'ny Ony Alto Paraná. Miaraka amin'ity zotra ity no misy ny riandrano 270 izay ananany ary ny Devil's Throat malaza, riandrano mahatalanjona 80 metatra ny haavony izay perla an'ny Valan-javaboary Iguazú Sambany tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo tamin'ny fiainako aho ka manana maromaro torohevitra rehefa mitsidika ny Riandranon'i Iguazu:
1 Milatsaka i Iguazu
2 Tsidiho ny riandranon'i Iguazu
3 Tsidiho ny riandranon'i Iguazu
4 Fitsidihana hafa ao amin'ny Riandranon'i Iguazu
Milatsaka i Iguazu
Amin'ny ilany iray an'i Arzantina, amin'ny ilany Brezila, ny riandrano ao amin'ny Reniranon'i Iguazú ao anaty ala izy ireo, faritra arovana ankehitriny any amin'ny firenena roa tonta. Amin'ny lafiny Arzantina dia ao amin'ny Valan-javaboary Iguazú ary vao haingana ny iray amin'ireo Fahagagana fito eto amin'izao tontolo izao.
Manana manodidina izy ireo Mitsambikina 275 ary ny maro an'isa, 80% no miorina amin'ny lafiny Arzantina, tafiditra ao anatin'izany ny Devoly Throat mahafinaritra. Amin'ny lafiny Breziliana dia misy fomba fijery tsara kokoa, karatra paositra, satria hitanao tsara daholo ny riandrano, fa ny fitsangatsanganana tsara indrindra, ilay mitondra anao any anaty ala ary mamela anao hahita ireo riandrano avy any ambony, ambany ary eo afovoan'ny rano, no omen'i Arzantina. Isaina fa ny fikorianan'ny riandrano dia 1500 metatra toratelo isan-tsegondra Miankina amin'ny orana daholo anefa izany ary nisy tondra-drano tsy manam-paharoa nahatonga ny riandrano mibontsimbontsina sy mipoaka.
Ny faritra dia nonenan'ny foko guaraní hatramin'ny fahatongavan'ilay mpanjanatany fotsy. I Álvar Nuñez Cabeza de Vaca no nahita ny riandrano tamin'ny 1542 ary tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX dia nanomboka ny asan'ny misionera ny Zezoita. Amin'ity hetsika ity misy sisan-javatra rava zezoita iray izay azo tsidihina ihany koa, na dia adiny roa na latsaka avy amin'ny riandrano aza izy ireo.
Tsidiho ny riandranon'i Iguazu
«Avy any Brezila ianao dia afaka mahita ireo riandrano ary avy any Arzantina dia afaka miaina izany ianao». Io no matetika resahina satria, araka ny nolazaiko teo aloha, avy amin'ny lafiny Breziliana dia tsara ny fomba fijery saingy avy any Arzantina ianao miditra amin'ny riandrano. Afaka roa andro dia afaka mitsidika ireo firenena roa ireo ianao, raha tsy ampy ho anao ny lafiny iray. Raha tsy manam-potoana ianao dia tsara kokoa ny mitsidika ny Valan-javaboary Iguazú, eo amin'ny lafiny Arzantina.
Ny valan-javaboary dia noforonina tamin'ny 1934 mba hitehirizana ny zava-manan'aina ny faritra ary ao amin'ny faritany Arzantina Misiones. Ny tanàna akaiky indrindra, misy ny seranam-piaramanidiny manokana, dia ny tanànan'i Puerto Iguazú. Eto no misy ny fizahantany rehetra. Afaka mandray fiaramanidina ianao na aiza na aiza any Arzantina ary mankany Iguazú. Feno trano fandraisam-bahiny sy maso ivoho fizahan-tany mandrindra fitsangantsanganana ilay faritra ka tena mora tokoa ny mitsidika azy.
Misokatra ny valan-javaboary isan'andro amin'ny taona manomboka amin'ny maraina ka hatramin'ny 6 hariva, na dia amin'ny 4 ora sy sasany hariva aza ny fidirana farany. Ny tahan'ny dia aseho amin'ny pesos Arzantina ary ny vola tapakila dia vola. Ny carte de crédit dia tsy ekena any amin'ny biraon'ny tapakila, vola ihany. Ao anatiny, any amin'ny fivarotana, kioska ary fitsangatsanganana dia azonao atao ny mandoa amin'ny carte de crédit. Mahamenatra, raha manontany ahy ianao, amin'ny maha-mpizahatany anao dia tsy maintsy mieritreritra ny hitondra vola be ianao handoavana ny fidirana, zavatra somary miavaka.
ihany koa Tsy maintsy mampiseho antontan-taratasy na pasipaoro alohan'ny andoavanao vola satria misy ny tahan'ny fahasamihafana: ny vidim-pidirana ankapobeny AR $ 260, ny mponina ao Mercosur (faritra iraisana any Amerika atsimo) dia mandoa AR $ 200 ary Arzantina mandoa AR $ 160, olon-dehibe. Ny zaza tsy ampy taona eo anelanelan'ny enina ka hatramin'ny roa ambin'ny folo taona dia mandoa AR $ 65, 50 ary 40 tsirairay avy. Ampangaina ihany koa ny fiantsonana, izay AR $ 70 isaky ny fiara. Ao amin'ny faritry ny Access Portal mankany amin'ny valan-javaboary dia misy locker karama ahafahanao mamela ny kitaponao.
Raha hijanona ao Iguazú mandritra ny roa na telo andro ianao, ny mahazatra, ary te hizaha milamina kokoa ny valan-javaboary ianao dia afaka miditra amin'ny Roa andro ao amin'ny Park mandalo miaraka amin'ny fihenam-bidy 50% ny andro faharoa. Rehefa vitanao ny fitsidihana voalohany dia ny miverina any amin'ny biraon'ny tapakila na ny biraon'ny tapakila ary manitsy ny tapakila amin'ny alàlan'ny fandoavana 50% amin'izany. Ny fitsidihana faharoa dia tsy maintsy eny na eny amin'ny andro misesy. Ohatra, raha tamin'ny andro voalohany nandalovanao ireo mitsambikina ny faharoa dia azonao atao ny mitaingina sambo na fitsangatsanganana an-dranomasina hafa amin'ireo natolotra.
Ny Park dia lehibe ary misy lalana sy faribolana maromaro mety kokoa ny hahafantarana tsara izay hataontsika ao anatiny. Manoro hevitra ny hanao izao manaraka izao aho: Circuits ambany, Circuit ambony ary ny totohondry an'ny devoly. Amin'izany lamina izany, satria mandeha ny sary amin'ny crescendo amin'ny hatsarana ary rehefa tonga any amin'ny Throat dia manaitra. Betsaka ny olona manomboka mifanohitra amin'izay, saingy tsy amporisihiko izy io satria hihena ny fanantenana.
Circuit ambany: Manana izany 1700 metatra ny halavany, tohatra vitsivitsy sy lavarangana panoramika ambonin'ny lohasaha Iguazú. Tombanana fa haharitra ny fitsangatsanganana iray manontolo adiny iray sy 45 minitra ary misy faritra fitsaharana iraisana miaraka amin'ny trano fidiovana sy bara eo amin'ny faritra idirana mankany amin'ny faritra. Ny dian-tongotra dia miditra tsimoramora any anaty ala, miampita riaka ary ala maitso tsy misy masoandro mandra-pahatongany any amin'ny Dos Hermanas, Ramirez ary Chico Falls. Avy eo dia mihazakazaka amin'ny riandrano Bossetti ianao ary avy eo amin'ny diany dia miafara amin'ny lavarangana amin'ny lohasahan-driaka ianao miaraka amin'ny fahitana ny Devoly Throat sy ilay zavona mahafinaritra. Ny faritra farany amin'ny fizaran-tany izay mamerina anao amin'ny fidirana dia ilay misy tohatra ary mamakivaky riandrano telo hafa.
Boriboritany ambony: diany 1750 metatra ny halavany y tsy misy tohatra io. kajy dia adiny roa ary manana trano fidiovana sy bar koa izy io. Io dia ahafahanao mahita ny koveta amin'ny riandrano rehetra ary misy lavarangana mijery maro mankafy ny fomba fijery. Namakivaky ny tampon'ny riandrano ianao ary misy faritra fitsaharana maromaro misy seza miala sasatra, mihaino ny rano ary maka sary. Mamindra anao eo amoron'ny Salto San Martín ianao, dia toerana be panoramic izay mamela anao koa fomba fijery malalaka ny lafiny Arzantina sy Breziliana, Nosy San Martín ary ny zana-tongotra izay tsy ho ela dia handehananao hahatongavan'ny Devoly Throat.
Tendan'ny Devoly: diany 2.200 XNUMX metatra, fitsangatsanganana Ary tsy misy tohatra koa io, amin'ny alàlan'ny lalambe lava ihany no mitondra anao mankany amin'ny Throat. Mirefy 1100 metatra ianao mandra-pahatonganao any amin'ny 80 metatra avo, onja zavona mandena anao sy tabataba maneno. Tonga reraka ianao amin'ny fandehanana be loatra fa raha vao mahita an'io seho io ianao dia hadinonao ny hafanana, ny dia ary ny masoandro. Hatsarana izany.
Azonao atao koa ny manaraka ny làlana sasany toa ny Sendero Macuco sy Salto Arrechea na ny Sendero Verde. Azonao atao ny manatevin-daharana ny boriborintany sy ny Garganta an-tongotra, tsy mandreraka izany raha ny re. Misy lamasinina ekolojika, maimaim-poana, izay manao io zotra io ihany saingy amin'ny vanim-potoana avo dia be ny olona ary laninao miandry eo amin'ny gara izany.
Fitsidihana hafa ao amin'ny Riandranon'i Iguazu
Raha manam-potoana ianao ary misy vola fanampiny dia misy dia an-dranomasina mahafinaritra:
Adventure mahafinaritra: fitsangatsanganana anaty kamio manokana izy ireo amin'ny alàlan'ny ala anaty ala. Dimy kilometatra mankany amin'ny seranan-tsambo avy eo am-piakarana sambo izay mandeha 6 kilometatra mankany amin'ny lohasahan'ny Reniranon'i Iguazú. Miaina ny riaka ianao ary mahita ireo riandrano.
Adventure Adventure: miaraka amina sambo matanjaka ianao mamakivaky ny lohasaha amoron'ny renirano, manamorona ny Nosy San Martín ary tonga eo amin'ny riandrano Tres Mosqueteros hahita ny Lohasaha.
Dia an-tongotra: ny lakana dia amin'ny alàlan'ny lakana, milamina, mangina kokoa. Izy io dia fidinana efa ho telo kilometatra mamela anao hanakaiky ny zavamaniry sy ny biby eo an-toerana.
4 × 4 safaris: misy fitsangatsanganana maromaro ao anaty 4 x 4 van, maharitra adiny roa. Fiaingana mahazatra amin'ny teny espaniola sy anglisy izy ireo, eo anelanelan'ny 10:30 maraina ka hatramin'ny 4 hariva. Mpandeha valo isaky ny fiara, AR $ 550 isaky ny olon-dehibe ary AR $ 275 ho an'ny ankizy 6 ka hatramin'ny 12 taona.
Ary farany, masoivoho fizahan-tany iray dia mitentina 300 $ eo ho eo isaky ny olona hanao fitsidihana. Izy ireo dia mandray anao amin'ny 7 ora sy sasany ao anaty fiara fitateram-bahoaka ary ao anaty vondrona iray dia ataonao ny dia manontolo mandra-pahatongan'ny 30 hariva. Ny safidy hafa, ilay nataoko sy notoroako hevitra dia manakarama taxi ary mandamina miaraka amin'ny mpamily hitondra anao ary haka anao amin'ny fotoana iray. Miakatra 450 $ Ar ry zareo ary manana fahalalahana bebe kokoa ianao. Ny sidina iray avy any Buenos Aires dia eo anelanelan'ny AR $ 2200 sy AR $ 4000, miankina amin'ny fiandrasana ny famandrihana na ny datin'ny taona ny sidina rehetra. Aerolineas Argentinas sy Lan dia manana sidina isan'andro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Arzantina » Torohevitra hitsidihana ny riandranon'i Iguazu amin'ity 2016 ity
Ny fiainana tsara indrindra amin'ny pelaka ao Bangkok
Toerana 10 tsara indrindra amin'ny 2016 araka ny Lonely Planet (II)